Global Voices amin’ny Teny Sinoa! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Desambra 2018 17:27 GMT
Tamin'ny volana Septambra lasa teo, nanomboka nandika lahatsoratry ny Global Voices amin'ny teny Sinoa ny bilaogera Taiwaney Portnoy – tsy izy rehetra, tsy ho vitan'olona iray izany, fa mitsimpona ary misafidy ireo zavatra noheveriny fa tokony ho fantatry ny tontolo mpiteny Sinoa bebe kokoa izy.
Nivadika ho Tetikasa iray Fandikana ny GVO amin'ny teny Sinoa ny fialambolin'i Portnoy mandika teny, izay nambarany vao haingana tao amin'ny bilaoginy teto. Avoaka anaty bilaogy roa ireo lahatsoratry ny GVO voadika ireo: ny iray ao amin'ny tanibe Sina (rohy maty) izay mampiasa ireo tarehintsoratra Sinoa notsorina, ary ny iray ao Taiwan izay mampiasa ireo tarehintsoratra Sinoa nentim-paharazana (izay voasakana ao Sina satria manakana sehatra fitoraham-bilaogy maro mifototra ao Taiwan ilay Great Firewall Sinoa).
Raha toa ka miteny Sinoa tsara ianao ary maniry ny hanampy handika ny GVO, kitiho eto (rohy maty) hamakianao ny lahatsoratra fenon'i Portnoy mikasika ny fomba ahafahanao mandray anjara. Misy ny Vondrona Google GVO翻譯小組, ary koa wiki GVO 翻譯計畫 (rohy maty) ampiantranoan'ny Taipedia.